के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी एक इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्ने यदि तपाइँ यसलाई निस्क्रिय गर्नुभयो भने? वा के तपाइँ तपाइँको पासवर्ड बिर्सनुभयो र कसरी प्रविष्ट गर्ने थाहा छैन? यो पोष्ट पढ्न हिम्मत गर्नुहोस्, र एक विशेषज्ञको रूपमा इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग प्रयोग गर्न उत्तम चालहरू र सुझावहरू पत्ता लगाउनुहोस्, तपाईंको स्मार्टफोन वा व्यक्तिगत कम्प्युटरबाट।
याद गर्नुहोस् कि, अधिक प्रयोगकर्ताहरूले खाता स्थायी रूपमा खोल्दछन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो पासवर्ड बिर्सनको लागि सामान्य छ। ती असुविधाहरू जोगिनुहोस्, र तपाईंको इन्स्टाग्राम खाताको सजिलो र सफल रिकभरी कसरी हासिल गर्ने सिक्नुहोस्। तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ?
म कसरी मेरो इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्न सक्छु?
कहिलेकाँही हामी खाताहरू सिर्जना गर्दछौं र पासवर्ड स्वचालित रूपमा बचत गर्दछौं। यसले धेरै जसो पासवर्ड बिर्सन सजिलो बनाउन अनुमति दिन्छ, यो इन्स्टाग्राम खाताहरू हराउने प्रमुख कारण हो। वा साधारणतया, हामी पासवर्डहरू राख्छौं जुन सम्झन गाह्रो छ, वा हामी सामान्य रूपमा प्रयोग गर्दैनौं।
यस अवस्थाको सामना गर्नुपर्‍यो, खाता पुन: प्राप्ति गर्न धेरै तरिकाहरू छन्। जे होस्, सबै खाता खाता को घाटा को मूल मा निर्भर गर्दछ।
इन्स्टाग्राममा खाता पुन: प्राप्ति गर्न मुख्य कुरा भनेको त्यो खाताको मौलिक डेटा सम्झनु हो, अन्यथा तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्न। डाटा मध्ये तपाईं कहिले भुल्न सक्नुहुन्न, हामीसँग:
तपाईको खातामा राख्नु भएको प्रयोगकर्ताको नाम।
ईमेल जुन तपाईंले इन्स्टाग्राम खाता सेट अप गर्दा प्रयोग गर्नुभयो।
फोन नम्बर यदि कुनै पनि समयमा तपाईंले यो इन्स्टाग्राम खातासँग सम्बन्धित गर्नुभयो।
फेसबुकमा पहुँच गर्नुहोस्, यदि तपाईंसँग यो सम्बन्धित छ भने। यो विकल्पले तपाईंलाई धेरै चरणहरूको आवश्यकता बिना नै चाँडो प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ।
एन्ड्रोइड अनुप्रयोगबाट तपाइँको खाता कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने?
तपाईंको मोबाइल फोन अनुप्रयोगबाट खाता पुन: प्राप्ति गर्न, निम्न चरणहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्:
तपाईंले अनुप्रयोग खोल्नै पर्छ, र तपाईसँग यो एक पटक खुल्ला भयो भने प्रयोगकर्ताको नाम। अनुप्रयोगको तल, पासवर्डको छेउमा विकल्प छ "के तिमीले उसलाई बिर्स्यौ?"
क्लिक गर्दा रिसेट प्रक्रिया सुरू हुन्छ।
2 पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस्
त्यहाँ इंस्टाग्राममा खाता पुनर्स्थापित गर्न3तरीका छन्। प्रयोगकर्ताको नाम सम्झेर वा ईमेलमा पहुँच भएको साथ तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ।
साथै, एक पाठ सन्देश मार्फत, यदि तपाईंले पहिले इन्स्टाग्राममा तपाईंको नम्बर दर्ता गर्नुभयो। र सबैभन्दा सजिलो छ तपाईंको फेसबुक खाता मार्फत, तर यसले मात्र काम गर्दछ यदि पहुँच अनुरोध गर्नु अघि यो लिंक गरिएको छ।
ईमेलको साथ रिसेट: तपाईंले "ईमेलको साथ रीसेट" मा क्लिक गर्नुपर्नेछ तपाईंले रिसेट लिंकको साथ ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंको ईमेल प्रविष्ट गर्नुहोस्, सन्देश खोल्नुहोस् लि select्क चयन गर्नुहोस् र प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस्। पासवर्ड परिवर्तन गर्दा तपाईलाई सजिलै याद राख्ने सुझाव दिईन्छ।
एक पाठ सन्देश मार्फत: यो उपयोगी छ यदि तपाईंले पहिले इन्स्टाग्राम खातामा फोन नम्बर सेट गर्नुभयो। तपाईको देशको कोड छनौट गरेर सुरू गर्नुहोस्, फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र स्वीकार गर्नुहोस्, कोड रिसेट हुनका लागि कुर्नुहोस्। कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्, र त्यसपछि पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्।
फेसबुकको साथ: यो मोड मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि तपाईंले दुई अनुप्रयोगहरूको डाटा साझा गर्नुभयो, अन्यथा यो असम्भव छ। यो धेरै सजिलो छ, विकल्पको साथ फेसबुकको साथ रिकभर गर्नुहोस् निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र एकै पटक प्रविष्ट गर्नुहोस्। सँधै नयाँ पासवर्ड राख्नुहोस् जुन यो याद राख्नुहोस् र यसलाई कहिँ लेख्न सजिलो हुन्छ।
कम्प्युटरबाट कसरी तपाईंको खाता पुन: प्राप्ति गर्ने?
तपाईको खाता व्यवस्थापन गर्न अर्को विकल्प कम्प्युटरबाट हो, तथापि, यस तरिकाले तपाईले आफ्नो पासवर्ड बिर्सिन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईको खाता पुन: प्राप्ति गर्न तपाईले इन्स्टाग्राम पेज खोल्नु पर्छ र तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ।
विकल्प छान्नुहोस् "के तपाईंले आफ्नो पासवर्ड बिर्सनुभयो?" यो पासवर्डको दायाँ पट्टि अवस्थित छ।
त्यसोभए ईमेल राख्नुहोस् जुनसँग तपाईंले इन्स्टाग्राम खाता खोल्नुभयो, तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईं रोबोट हुनुहुन्न र रिसेट पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोस्।
ईमेल खोल्नुहोस्, तपाईंले रीसेट लिंकको साथ ईमेल प्राप्त गर्नुपर्नेछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्, र त्यसपछि यो तपाईंलाई फेरि प्रविष्ट गर्न सोध्नेछ कि त्यहाँ कुनै गल्ती छैन कि भनेर हेर्नका लागि।
त्यसपछि, तपाईंको खाता पुन: पहुँच गर्नुहोस्।
कसरी तपाईंको खाता पुन: प्राप्ति गर्ने यदि इन्स्टाग्रामले बन्द गर्यो भने?
के तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता खोल्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र लगइन गर्न असम्भव छ? के तपाइँको जानकारी सहि छ र यस्तो देखिन्छ कि तपाइँको खाता निलम्बित गरिएको छ?
यो धेरै सम्भावना छ कि इंस्टाग्राम कम्पनीले तपाईंको खाता बन्द गरेको छ किनभने उनीहरूको लागि तपाईंले प्रयोगको केही नियमको उल्लंघन गर्नुभयो। यो समस्या समाधान गर्न तपाईंले निम्न चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ:
Instagram अपील पृष्ठ खोल्नुहोस्। यदि तपाइँ तपाइँको कम्प्युटरबाट गर्नुहुन्छ भने जानुहोस् अर्को लिंक। एक खाता पुन: सक्रियण अनुरोध फर्म त्यो पृष्ठमा देखा पर्नेछ।
फारममा तपाईले आफ्नो डेटा सही तरीकाले राख्नुपर्दछ, तपाईको इन्स्टाग्राम खातामा प्रयोग गर्नुहुनेसँग पूर्ण रूपमा मिल्दोजुल्दो छ।
बाहिर आउने प्रत्येक बक्समा भर्नुहोस्, कुनै खाली छोड्नुभएन। खाता, फोन नम्बर र ईमेलमा तपाईले खोल्नु भएको खाता प्रयोग गरीएको उपयोगकर्ता नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्।
पृष्ठको अन्तिम बक्समा तपाईंले एक संक्षिप्त र संक्षिप्त सन्देश लेख्नु पर्छ। तपाईं वर्णन गर्नुहुनेछ कि तपाईं किन रमाइलो तरिकाले र उपयुक्त भाषाको साथ खाता बन्द गर्न सहमत हुनुहुन्न। पाठमा माफी माग्नुहोस्, किनकि यदि तपाईं त्यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ।
यो पनि सकेसम्म चाँडो समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ, तर अपमानजनक भाषा प्रयोग बिना।
अन्तमा, पृष्ठको तल निलो बटनमा क्लिक गरेर यसलाई पठाउनुहोस्।
म पुनःसेट अनुरोध कति पटक पठाउन सक्दछु?
तपाईं खाता बन्द अपील अनुरोध दिन मा धेरै पटक पठाउन सक्नुहुन्छ पठाउन सक्नुहुन्छ। विचार यो हो कि तपाइँ यसलाई पठाउँनुहुन्छ जबसम्म इन्स्टाग्राम प्रशासकहरूबाट प्रतिक्रिया आएको हुँदैन।
एक पटक उनीहरूले तपाइँको अनुरोधको जवाफ दिईयो र खाता निलम्बन हटाउनुहोस्, तपाइँ तपाइँको खाता पुन: पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यदि तपाईंले यो बन्द गर्नुभयो भने के तपाईं फेरि आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता खोल्न सक्नुहुन्छ?
यदि गल्तीले वा खराब निर्णयहरू द्वारा तपाईंले आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता मेटाउनुभयो भने, यसलाई पुनर्प्राप्ति पूर्ण रूपमा असम्भव छ। यदि यसको सट्टामा तपाईंले यसलाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गर्नुभयो भने, तपाईं यी चरणहरू अनुसरण गरेर यसलाई पुनः प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंले इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ जहाँ तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्ता डाटा राख्नुहुनेछ। ती मध्येच ईमेल र फोन नम्बर, जुन तपाईं पुन: सक्रिय गर्न चाहानुहुन्छ खाताको अनुरूप हुन सक्छ।
यदि तपाईंले पासवर्ड याद गर्नुभएन भने, तपाईं यसलाई ईमेल वा टेक्स्ट सन्देश मार्फत समान तरिकाले अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसो भए तिनीहरूले तपाईंलाई ईमेलमा लिंक पठाउनेछन् तपाईं पासवर्ड कहाँ राख्नुहुनेछ र क्लिक गर्नुहोस् जहाँ यसले खाता पुनः सक्रिय पार्दछ
यस अवस्थामा समयले धेरै गणना गर्दछ, किनकि पुन: सक्रिय खातामा निश्चित सर्तहरू राख्न सकिन्छ। फेरि, प्रविष्ट गर्नु अघि तपाईंले फोन नम्बर अपडेट गर्नुपर्नेछ।
इन्स्टाग्राममा प्रवेश गर्दा कसरी समस्याहरू समाधान गर्ने?
कहिलेकाँही यस्तो हुन्छ कि तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता पहुँच गर्न को लागी प्रयास गर्नुहुन्छ र तपाईं लगइन गर्न सक्नुहुन्न भनेर। धेरै चोटि यो एन्ड्रोइड पृष्ठ वा अनुप्रयोगमा समस्याहरूको कारण हुन सक्छ।
यदि तपाईंले गलत पासवर्ड पाउनुभयो भने, पासवर्ड प्रविष्ट गरेर तपाईं गल्ती गर्नुभयो। यदि तपाईंले यो बिर्सनु भएको छ भने, यो उत्तम छ तपाईंको ईमेलको साथ रिसेट गर्नका लागि।
अर्को कुरा तपाईले गर्न सक्ने यी कार्यहरू कुनै पनि काम गर्दैनन्, अर्को कम्प्युटर वा प्लेटफर्मबाट प्रवेश गर्नु हो। यसको साथ तपाईं प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको उपकरणहरू राम्रो कार्य क्रममा छ, र यस तरिकाले समस्या समाधान गर्नुहोस्।
जब इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग समस्या हो, तपाईं वाइफाइ बन्द गर्न सक्नुहुनेछ र फोन डाटा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले इन्स्टाग्राम सुरू गरेको बेला केहि समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ।
एन्ड्रोइड अनुप्रयोगको साथ समस्याहरू समाधान गर्ने एउटा सजिलो विधि यसलाई हटाउनु र यसलाई पुन: स्थापना गर्नु हो। धेरै केसहरूमा यसले समस्याहरू समाधान गर्दछ, खास गरी यदि यो अद्यावधिक गरिएको छैन।
अन्तमा, एक इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति सम्भव छ, जब सम्म तपाईं यसलाई स्थायी रूपमा मेटाउनुहुन्न। इन्स्टाग्रामले धेरै सम्भावनाहरू खाता पुन: स्थापनाका सर्तहरूमा खुला राख्दछ, तपाईंले भर्खरै तपाईंको लागि सबैभन्दा उपयुक्त प्रयोग गर्नुपर्दछ।
कुनै श doubt्का बिना, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ जहिले तपाइँको व्यक्तिगत डेटा र तपाइँले खाता खोल्न प्रयोग गर्नुभएका ती सम्झना राख्नु पर्दछ। सजिलैसँग पुन: भण्डारण गर्न तिनीहरू प्रत्येक आवश्यक छ।
एक सिफारिसको रूपमा, दिमागमा पासवर्ड सुरक्षित गर्नुहोस्, यसले प्रमुख असुविधाहरू जोगिनेछ। हामी आशावादी छौं कि हाम्रो चालहरू र ईन्स्टाग्राम खाता कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने भन्ने बारे सुझावहरू धेरै उपयोगी भएको छ।